Matare Oomesera Mapurisa Anotyora Kodzero dzeVanhu
Kurume 11, 2016
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu VaTendai Biti avo vanotungamirawo bato rePeople’s Democratic Party vanoti vari kufara kuti mutongi wedare repamusoro akati chikamu 70 chemutemo wePolice Act chinoti munhu anotyorerwa kodzero dzake nemapurisa ane mwedzi mitanhatu chete yekumhan’ara nyaya yake hazvisi pamutemo.
Nyaya iyi yakaendeswa kudare nevamwe varume vaviri vainge vari muchiuto VaMichael Munyika naVaChrispen Tobaiwa vaimirirwa naVaBiti. Vaviri ava vakapfuurwa nemapurisa vachifungidzirwa kuti imbavha pakamba yemapurisa yeBanket muna 2014.
Vakaendeswa kumatare nemauto aya igurukota rezve kudzivirirwa kwemukati menyika VaIgnatious Chombo, mukuru wemapurisa VaAugustine Chihuri uye mapurisa maviri akapfuura mauto aya.
VaMunyika vari kuda mari inosvika zviuru mazana matatu nemakumi masere nemaviri kubva kuna VaChombo naVaChihuri. VaTobaiwa vanoti vanoda mari inosvika zviuru mazanu mashanu nane mazana makumi masere.
Vaviri ava vainge vazivisa mapurisa kuti vaizoda kuenda kudare pavakapfuurwa asi vakakwanisa kuzoita izvi kwapera mwedzi gumi nemumwe sezvo vainge vari muchipatara. Mutongi Amai Tsanga vakatambira tsananguro yevarume ava yekuti vakanonoka kuendesa nyaya kudare nekuti vainge vari muchipatara. Mutongi akakurudzirawo mapurisa kuti avandudze mashandiro avo.
Nyaya Ina VaTendai Biti